ရိုဟင်ဂျာ ထောက်ခံသူ ချိုတူးဇော် သို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ~ Myanmar Express
ရိုဟင်ဂျာ ထောက်ခံသူ ချိုတူးဇော် သို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ
From : Myo Chit Myanmar ဒီနေ့ FB မှာ ချိုတူးဇော် ဆိုတဲ့ တစ်ခါမှ မကြားဖူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ ဆိုသူ က .. သူအခု အလုပ်လိုချင်လို့ ချဉ်းကပ်နေတဲ့ VOA RFA BBC အသိုင်းအဝိုင်းတွေ အကြိုက်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ ... သူ့ဆီ မနေ့ည က G-talk ကနေ စင်္ကာပူ မှာနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီ မတစ်ယောက်က .. မြန်မာပြည်က သူ့ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးတွေ က သူ့ ဆီ ဖုန်းဆက်ပြောခဲ့တာပါ .. လို့ .. အစချီပြီး ... နောက်ဆုံး ဆိုလိုရင်းက .. " မြန်မာ တွေက သောက်ပိုတွေ လုပ်နေတာပါ တကယ်တမ်း ခံနေရတာက ဘင်္ဂါလီတွေ ပါ " ဆိုတဲ့ .. ရိုဟင်ဂျာ မ ရဲ့ စကား ကို တထစ်ချ ရာနှုန်းပြည့် မှန်ကန်နေသယောင် အခိုင်အမာ ထောက်ခံ စွတ်ဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ။ သူပြန်ဖျက်လိုက်မှာစိုးလို့ အောက်မှာ ကူးယူပေးလိုက်သလို ကျွန်တော် ရေးလိုက်တဲ့ Comment ကိုပါ မူရင်းအတိုင်း အောက်ဆုံးမှာ ပြန်ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့မူရင်းက - https://www.facebook.com/chotuzaw/posts/361371553929059 _______________________________________ ဒင်္ဂါးပြား ရဲ့ တစ်ဘက်မှာ . . . မိတ်ဆွေ တို့ရေ မနေ့က ညတော်တော်နက်တဲ့အချိန်မှာ စင်္ကာပူမှာနေထိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်သူ မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတဦးက ကျနော့်ဆီကို ဂျီတော့ခ် က တဆင့် ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ သူက ကျနော့်ကို ရင်ဖွင့်ချင်လို့၊ ပြောစရာတွေ ရှိလို့ပါ လို့ အစချီပြီး ပြောခဲ့တာတွေကတော့. . . ဒီအမျိုးသမီးဟာ “ရိုဟင်ဂျာ” ပဲ ခေါ်ခေါ်၊ “ဘင်္ဂလီ” ပဲ ခေါ်ခေါ်၊ “မြန်မာမွတ်စလင်” ပဲ ခေါ်ခေါ်၊ “ကုလားမ” ပဲ ခေါ်ခေါ် မြန်မာပြည်ပေါက် မြန်မာပြည်သူစစ်စစ်တဦးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သူ့ဘိုးဘွားတွေ လက်ထက်ကတည်းက မြန်မာပြည်မှာနေထိုင်လာခဲ့တယ်။ သူ့မိဘများသာ မက ဘိုးဘွားများက စစ်တွေမှာမွေးတာပါ။ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ စစ်တွေ ကို တခါမှတောင် မရောက်ဖူးတဲ့ ရန်ကုန်သူ စစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ လက်ရှိစင်္ကာပူမှာနေထိုင်တာ ၈ နှစ်ကျော် ရှိလာပြီ ဖြစ်ပြီး၊ သူ့သားသမီးတွေဟာ စင်္ကာပူမှာမွေးတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေလုံးလုံး ဖြစ်နေပြီ လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကို သံသယ မဖြစ်စေပဲ လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းတချက်က သူ့ရဲ့ စကားပြောသံ. ၊ သူ့ရဲ့ “လေ” ပါ။ သူ့အသံက ရခိုင်တယောက်နဲ့တောင်မတူ၊ “ကုလားသံ”တောင်မစွက်တဲ့တကယ့် မြန်မာတယောက်လို ပီပီသသပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူအဓိကပြောသွားခဲ့တာတွေကတော့ သူ့ဦးလေးတွေဟာ၊ စစ်တွေမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာနေပါတယ်။ အဲဒီမှာ မွတ်စလင်ဘာသာဝင် အများစု နေကြပါတယ်။ လတ်တလော မနေ့က မနက် ၁၀ နာရီခွဲလောက် ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ ရတဲ့အခြေအနေကတော့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့ မွတ်စလင်လူမျိုးများဟာ ပိတ်မိနေပါတယ်။ ထွက်လို့လည်း မရပါ။ ထွက်လာတာနဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ရဲ့ ပစ်ခတ်မှု ကို ခံရပါတယ်။ တဘက်ကလည်းရေဖြတ်၊ မီးဖြတ်နဲ့ အိမ်ထဲမှာ နေဖို့ အဆင်မပြေတာတွေ ကြုံနေရတယ်။ တချိန်တည်းမှာ သူတို့ အနေနဲ့ အခိုင်အမာပြောနိုင်တာကတော့ စစ်တွေ၊ မောင်တော ဒေါသတွေကိုတဘက်နိုင်ငံက ဘင်္ဂါလီတွေ ရာချီပြီး ကူးလာတယ်၊ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေနဲ့ ဆိုတာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး တဲ့။ ဒါဆို ရိုဟင်ဂျာ တွေ ဆိုတာကကော လို့ မေးတော့ ကျမတို့ကို ရိုဟင်ဂျာတွေလို့ ကျမတို့ကိုယ် ကျမတို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မဆလခေတ် က ကျမတို့ကိုဌာနေတိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးနေ၀င်းကိုယ်တိုင်က “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုတဲ့နာမည်ကို အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့တာပေါ့ တဲ့။ ကျမအဖေဟာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမအဖေ ရဲ့ဓါတ်ပုံ ကို ရိုဟင်ဂျာမောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးနဲ့တကွကျမတို့မှာ ခုချိန်ထိ ရှိပါတယ် တဲ့။ ဦးနေ၀င်း က ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ကိုယ်စားမပြုကြောင်းနဲ့ ဒီအချိန်မှာ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့သာ ဆွေးနွေးရင် ပိုဆိုးရွားသွားနိုင်တယ် လို့ ကျနော်သူ့ကိုပြန်ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်အတွေးထဲ ဖျတ်ခနဲ သတိရမိတာ ရှမ်းပြည် အရှေ့မြောက်ပိုင်းက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်ကာလအတွင်းမှာမှ ပေါ်လာတဲ့ “ကိုးကန့်” ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသား အသစ်စက်စက်တွေကိုပါပဲ။ထားပါတော့လေ။ ဆက်ပြောချင်တာက အဲဒီ အမျိုးသမီးဆက်ပြောသွားတာ၊အဲဒီမှာ လက်ရှိ ဆူပူသတ်ဖြတ်မီးရှို့တာတွေ လုပ်နေတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ သူတို့နဲ့ ရွာနေအိမ်ထိုင်နေလာခဲ့တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်က လူတွေမှန်းလဲ မသိဘူး တဲ့။ အဲဒီ ကလူတွေ ပြောနေဆိုနေကြတာတော့ ကြံ့ဖွံ့တွေနဲ့ စစ်တပ်က ပူးပေါင်းပြီး လုပ်နေတယ် လို့ သိရပါတယ် တဲ့။မိတ်ဆွေတို့ရေ. .သတင်းတိကျ မကျ၊ သူပြောသမျှ မှန် မမှန် ကျနော် ဘာတခု မှ အာမ မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောလာတဲ့ အကြောင်းအရာ တခုကို ပြန်ဖေါက်သည်ချပါတယ်။ နောက် ဝေဖန်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြစေချင်တယ်။တခါတရံမှာ ပြဿနာတွေဟာ ဒင်္ဂါးပြားလိုပဲ ကိုယ်မြင်တဲ့ ဆိုဒ် တဘက် တည်းသာမက တခြားတဘက်မှာ ပြဿနာတွေ တသီကြီး ရှိနေပါတယ်။ ပြောရရင် အဲဒီဒေသတွေကို စစ်တပ် က အလုံးအရင်းနဲ့ ရောက်သွားတာ ဘယ်နှရက်ရှိနေပြီလဲ။ခုချိန်ထိ ကို ဘာလို့ မီးလောင်မှုတွေ၊ ဖျက်ဆီးမှုတွေဆက်တိုက် ဖြစ်နေသေးတာလဲ။ဘင်္ဂလီတွေ ရာချီလက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေနဲ့တဘက်နိုင်ငံက ကူးလာတယ် ဆိုတာ သက်သေအတိအကျ ပြနိုင်စရာ ဘယ်မှာလဲ။ မေးခွန်းတွေအများကြီး မေးကြရအောင်။ နောက် ဒီပြဿနာကို ဘယ်က စ ပြီး အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အပါအ၀င် အင်တာနက်တွေမှာ ရေးသားနေကြတဲ့သူတွေ က ကော ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာဟာ ၆ လ ကျော် ၈ လနီးပါး ကျနော် အမေရိကားရောက်ခါ စ ကတည်းက မွှေးလာတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ အရှိန်ယူလာတဲ့ ခေါင်းစဉ်တခု ဆိုတာ ဒီ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် မှာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖတ်နေတဲ့သူတွေ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဟာ တက်လာတဲ့ သတင်းတွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး ခံစားရ၊ ဆုံးဖြတ်ကြ၊ ပေါက်ကွဲကြနဲ့ တကယ်တမ်း အဲဒီ သတင်းတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားတွေကို သေချာလေ့လာဆန်းစစ်ဖို့လိုလာပြီ။ အထူးသဖြင့် ဒီကိစ္စမှာ စ ကတည်းက ကျနော်ထောက်ပြခဲ့သလို မရိုးသားမှုတွေ ဟာ တခုပြီး တခု ဆင့်ကဲ တွေ့နေရတယ်။ ခုလည်း ရန်ကုန်မှာ သောကြာနေ့ကို ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ် ဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်နေပြီ။ ဒါဟာ ဘာကို ဦးတည်နေတယ် ဆိုတာ အားလုံး အကင်းပါးပါးနဲ့ သိဖို့ လို၊ အားလုံး ရှောင်ကွင်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ မသမာတဲ့ လူတစု က တိုင်းပြည်ရဲ့ ကြမ္မာကို စတေးပြီး၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကို စတေးပြီး မင်းသားကြီး မဖြစ်နိုင်မှန်းသိလာတဲ့အတွက် ပတ်မကြီးတွေ ထိုးဖေါက်ပစ်လာတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ လို့ပဲ ကျနော်တော့ မြင်တယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အထူးသဖြင့် မွတ်စလင်ညီနောင်တွေကို မေတ္တာ ရပ်ခံ တိုက်တွန်းချင်တာက ဒီမသမာတဲ့သူတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ကျနော်တို့ရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကို နည်းနည်းလေးမှ တန်ဖိုးမထားပဲ သူတို့ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် “အသုံးချ”နေတယ် ဆိုတာကို မမေ့မလျော့မပေါ့ပဲ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဘာမှ မမှားရဖို့ထိန်းသိမ်းပေးပါ။ တတ်နိုင်မယ် ဆိုရင် လမ်းပေါ်လုံးဝ မထွက်ကြပါနဲ့။ ၈၈ များ၊ ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းလိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး၊မွတ်စလင်အများစု လိုအပ်ချက်တွေ (လိုအပ်လာရင် ဈေးဝယ်တာကအစ) ကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်သလဲ ဆိုတာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။ ဒီအချိန်မှာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် လုပ်မယ်၊ ပြီးရင်ဘယ်သူတွေ က အမြတ်ထုတ်မယ် ဆိုတာ အကျယ်တ၀ံ့ရေးစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဒီပို့စ် ရဲ့ အောက်ကနေ စစ်အုပ်စုတွေဘက်က ၀င်ပြော၊ ၀င်တိုက်ခိုက်တဲ့ သူတွေရဲ့ ကွန်မင့်တွေအားလုံး ကို ဘလော့ဂ်ပါ့မယ်။ ဒါ့ထက်မက သတင်းအချက်အလက်တွေ မကြာမီမှာ တက်လာပါလိမ့်မယ်။အားလုံးလည်း လက်လှမ်းမီသလောက် ၀ိုင်းစုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ချိုတူးဇော် __________________________________________________________ မျိုးချစ်မြန်မာ ၏ တုံ့ပြန်ချက် တောင်ပို့ကြားထဲကထွက်လာတဲ့ ချိုတူးဇယ် သို့ ... ခင်ဗျား ဒီမှာ နေဖို့ Asylum ရဖို့နဲ့ VOA နဲ့ RFA မှာ အလုပ်ရဖို့ တိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုး ကို သစ္စာမဖေါက်ပါနဲ့။ ခင်ဗျား လေသံဟာ VOA BBC RFA DVB တို့ က အသံတွေ နဲ့ တစ်လေထဲ ဖြစ်နေတယ်။ဒါဟာ အကြမ်းဖက်သူတွေ လုပ်ရပ်ဆိုတာ ဒီလောက် သိသာနေတာကိုလဲ တာဝန်အရ အစိုးရကိုဘဲ မဆီမဆိုင် တမင်ကြီး ကို အသားလွတ် လိုရာဆွဲယူဆက်စပ် စွပ်ဆွဲနေတယ် ခင်ဗျားစာကို ဖတ်လိုက်မိတော့ သေချာနားလည်လိုက်တာ တစ်ခုက ခင်ဗျား ညသန်းခေါင်ကြီးလဲ မိန်းမ ဆိုရင် နိုင်ငံတကာ က ရိုဟင်ဂျာမ တွေ နဲ့ ကအစ ချက်နေတာဆိုတာတစ်ုခုထဲဘဲ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ စစ်တွေက တကယ် ပြောနေတဲ့ ရခိုင်တွေ ကို ခင်ဗျား တစ်ချက်တောင် မဆက်သွယ်ကြည့်ဘဲ နဲ့ စင်္ကာပူ က ရိုဟင်ဂျာမ တစ်ယောက် ရဲ့ ခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့ G-Talk က အပြောတစ်ခုထဲနဲ့ တစ်မျိုးသားလုံး ကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဒီစာမျိုးရေးတယ် ဆိုကထဲက ခင်ဗျား လူမျိုးတွေ ပေါ်မှာ ဘယ်လို သစ္စာနဲ့ စိတ်ဓါတ် ခံယူချက် ရှိလဲဆိုတာ သက်သေပြလိုက်တာပါဘဲ။ (နောက်ပြီး ဒီအချက်အလက်တွေကို သံသယ မဖြစ်စေပဲ လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းတချက်က သူ့ရဲ့ စကားပြောသံ. ၊ သူ့ရဲ့ “လေ” ပါ။ သူ့အသံက ရခိုင်တယောက်နဲ့တောင်မတူ၊ “ကုလားသံ”တောင်မစွက်တဲ့ တကယ့် မြန်မာတယောက်လို ပီပီသသပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။) ရိုဟင်ဂျာမ ဆိုပြီး မြန်မာသံ ပီပီသသကြီး နဲ့ ပြောနေပါတယ် ဆိုတာကိုတောင် ခင်ဗျားက သံသယ မဖြစ်တဲ့အပြင် ပိုတောင် ယုံသွားသေးတယ် ဆိုတော့ ခင်ဗျား ဥာဏ်ရေ ဘယ်ထိတာသွားလဲဆိုတာ သေချာသွားပါပြီ။ ဒါဆို ခင်ဗျားဆီ ကျွန်တော် ခုဖုန်းဆက်ပြီး ကျွန်တော် ဘင်္ဂါလီ စစ်စစ် ရခိုင် စစ်စစ်ကြီးပါဆိုလဲ ခင်ဗျား လုံးဝယုံမယ်ပေါ့ကျုပ်လဲ ဝဲမှမဝဲတာ တစ်သက်လုံး မြန်မာလိုဘဲ မြန်မာသံနဲ့ဘဲ ပြောလာတာဘဲဗျ ဒါဘာထူးဆန်းလဲ။ ခင်ဗျား ည ည Chat နေတဲ့ သူတွေ ထဲမှာ Al - Qaeda အဆက် ရိုဟင်ဂျာ တွေ လုံးဝ မရှိပါဘူးလို့ ခင်ဗျား အာမခံနိုင်လား။ တစ်ုခုတော့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား ဒီစာကိုတစ်ကယ်ရေးထားတယ် ဆိုရင် စာအလယ်က Page Width နဲ့ စာအစ နဲ့ အောက်ဆုံးက လုံးဝ မတူတာကတော့ Chat Box သို့မဟုတ် IM BOX သို့မဟုတ် Email ထဲက တစ်ယောက်ယောက် အကြိမ်ခြင်း ခွဲပြီး ပို့ပေးထားတဲ့ စာကို ပြန် COPY & PASTE လုပ်ထားတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။ ခင်ဗျား မနေ့တနေ့ကမှ အစိုးရဆီက လွတ်မြောက်တဲ့မြေ စရောက်တာနဲ့ နိုင်ငံရေးယောင်ယောင် အနုပညာသမား ယောင်ယောင် လုပ်နေတာတွေ ကျွန်တော် ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး ဒါပေမယ့် ကျုပ်လူမျိုးတွေကဘဲ လိမ်နေသလိုလို တော့ လာမလုပ်ပါနဲ့ ခင်ဗျား တက်ချင်နေတဲ့ အမြင့်တစ်ခုရောက်ဖို့အတွက် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို ဘယ်တော့မှ လှေကားထစ် လာမလုပ်နဲ့လေ။ ခင်ဗျား လို သစ္စာဖေါက် ရေးတဲ့စာ ဟာ ရခိုင်တွေ နဲ့ မြန်မာတွေ နဲ့ သမိုင်းမှာ ...ရုပ်ရှင်လောက သမိုင်းမှာ ...ခင်ဗျားသေတဲ့အထိ တစ္ဆေတစ်ကောင်လို ခြောက်လှန့်ဖို့ ကျန်ရစ်ခဲ့စေရမယ်။ ခင်ဗျား ငွေပြတ်နေရင် ရှင်းရှင်းပြောလိုက်ပါ။ ရခိုင်တွေ ပြာပုံအောက်က မီးသွေးဖြစ်သွားတဲ့ အိမ်ထင်းတွေကို ရောင်းပြီး ပို့ပေးလိမ့်မယ်။ သူတို့ပေးခဲ့ရတဲ့ အသက်တွေ ကိုတော့ လုပ်စားဖို့ သက်သက် မစော်ကားပါနဲ့ ... ။ ။ လူမျိုးရေး သစ္စာ အနုပညာ သစ္စာ ဖြင့် မျိုးချစ်မြန်မာ (မှတ်ချက် ။ ။ ဒီ Post ရဲ့အောက် မှာ အမှန်တရား နဲ့ အမျိုးသားရေး အတွက် တပ်မတော် နဲ့ ရခိုင်မြန်မာ တွေ ဖက် က ရပ်တည်ပြီး ဝင်ပြောတဲ့သူတွေ ကို ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်သလို။သဘောမတူခဲ့လို့ ယုတ္ထိရှိရှိ အချက်အလက် ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ယဉ်ကျေးစွာ ဆွေးနွေးလိုသူတိုင်းကိုလဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ လုံးဝ Block မလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ နိုင်ငံရေးအရေခြုံ ကိုယ်ကျိုးရှာသမား/အနုပညာသမား ယောင်ယောင် တွေကို ပက်ပက်စက်စက် ဆဲချင်ဆိုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီမှာတင်မက မူရင်းရေးသားသူထံပါ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်စေလိုပါကြောင်း ။။။) Myanmar Express
15 June 2012 15:24
အဒီ ချိုးတူးဇော်ဆိုတဲ. ခွေးမသားနာမည်ကြားဖူးတာကြာပြီ ဟိုတခါ စက်ရုံအလုပ်သမား ကိတ်စတုန်းကလည်း လုံထိန်းတွေကပဲပစ်တာလိုလိုနဲ. သူရေးသွားတာမှတ်မိသေးတယ် သေသွားတဲ. မသီတာထွေးနေရာမှာ မင်းမိန်းမ မင်းနှမတွေ ဖြစ်လိုက်ရမှာ ပြည်ပမှာနေပြီး ဖင်ခေါင်းကြယ်နေတဲ.ကောင်ရုပ်ကိုက ဘင်္ဂလီကုလားရဲ. မယားပါသားရုပ်
ဒွေးနဲ့လုပ် စားမယ် ဆိုပြီ ကားရိုက်နေတုန်း ဒွေးသေ သွားတော့သူ မှာ လုပ် စရာ မရှိ တော့ နိုင်ငံ ရေး ၀င်လုပ်နေတာလား?
Chotwozaw, I guess you are under gratudrate person because you never analysis any news.
15 June 2012 15:56
ချတ်တိန်ဇော်ရယ် ခင်ဗျာ bbc မှာ အလုပ်တခုခု ရချင်လား မပူပါနဲ့ကုလားဆီဖင်ကုန်းလေ နွားလို အလိုးခံလိုက်အုံးbbc က ဖာသေမတွေ အာရပ်က ကောင်တွေဆီ နွားမတွေ လို ကုန်းလိုး ခံနေကြတာ မတွေ့ဘူး လား bbc မှာ အားလုံးနီးပါးက ကုလား အလိုးခံ ကောင်မတွေချဉ်းဘဲ အကြီး ဆုံး မြန်မာပြည်က ကောင်စောက်ဖုတ်ကိုလည်း လိုးမရတော့ လို့ ဓါးထိုးမွှေးမယ် ခြိမ်းခြောက်ထားလို့ သာ ပြောနေရတာ လို့ သိတင်း တွေ ကြားနေရတယ် ၊၊
Cho to Zaw is new begger. Now you read today Bagadad embssy anouncement.Ok. Next time your wife becaming rohinger wife. May be your morther got fuck by him ready ow.
15 June 2012 21:19
ဦးလေး ကြီးက အမျိူမစစ် တဲ့ ကောင်ကြိး ပဲ အမျိူးမစစ်ုလိ့ အမျိူးမချစ် တဲ့ ကောင် ကြီး ပိုက်ဆံ ၇၇င် ကုလား ကို လဲယောက် ဖတော်မ လို့ လား
http://www.rohingyablogger.com/2012/06/blog-post_6646.html ခွေးသူတောင်းစားတကောင်ကလာလဲနေသေးတယ် မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေပြောနေတယ်
15 June 2012 21:40
ချိုးတူးဇော်မ သာ ကောင် ကုလား ဖင် လျက် ချင် တဲ့ အကောင်အမြန် သေ ပါ စေ
15 June 2012 21:52
ချိုတူးဇော်ဆိုတဲ့ကောင်လီးဘဲ ဒီ၇ခိုင်ပြည်မှာဖြစ်တဲ့ပြတ်သနာကို လိုင်းပေါ်ကနေ နေ့တိုင်းကြည့်နေတာကွ မင့်ပြောချင်၇ာပြောေ၇းချင်၇ာေ၇ှာက်မေ၇းနှင့်ကွာ ဒီကစ္စဘယ်ကနေစတယ်ဆိုတာ မင့်သိတယ်မဟုတ်လား ဒီတစ်ခါမင့်နှမအလှည့်ေ၇ာက်ပြီသိလား မူဆလင်ဆိုတာကမြေခွေးနှင့်အတူတူဘဲကွ တစ်ကမ္ဘာလုံးသိပါတယ်ကွာ
15 June 2012 22:46
ချိုတူးဇော်အကြောင်းသိရဲ့လား ငယ်ငယ်က ကျပ်မပြည့်လို့. ကြိးမှကျောင်းထားရတာ သူကိုသူ ကဘာကျော် ဒါရိုက်တာ. လို့ပြော လိုပြော ရူးနေတဲ့ကောင်လေ စောက်ရူးပေါ့
16 June 2012 12:59
တပ်မတော်ဆိုတာ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရတယ့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ပါ။ဒါဟာအခုမှမဟုန်ပါဘူး။တပ်မတော်စတင်တည်ထောင်ကတည်းကပါ။အခုလို တပ်မတော်အပေါ်နားလည်မှုရှိလာတာဟာ ကောင်းတယ့်အမြင်ပါ။လူတိုင်း အခုလိုနားလည်ပေးနိုင်ပါစေ
17 June 2012 22:30
Cho two zaw ,Min mother ko rohingya loe pyi mha mway lar tal kaung ka myar.Rohingya ko tha nar yin,min nyi ma htat pay lite.Nyi ma ma sheet yin,Min ko taing phin khan lite.
You are not Myanmar . You are Kalar,cho too zaw.
18 June 2012 00:07
myanmar pome say rakhine see or cobara snakefirst kill rakhin
18 June 2012 06:55
Cho Too Zaw. I know you. I'm also well known vocalist in Myanmar. We met2or3times when you're in here. Why are you talking like that. These words are very disgrace to our variety artists and professionals from our region(Film,Music,Literature,Art and Opera).You are not an artist. You'are justaperson who betrayed your country and nation. If you wanna talk like that again, you have to give your mother to rohingya to get raped by them. You are never become true artist in our society.Because you never have an oath on ur motherland and it's nation. If you see this comment, think how disgusting your self is.I wish you see this comment. I'm an artist just as you. but different between you and me is that I have faith and oath in my motherland and I love our true nations. If you need money, try in another way but not sell the rakhine victims' souls. When you are talking like that, even the begger has more standard then you because at least he didn't sell his nation. Cho Too Zaw, never come back to our artist community again.
18 June 2012 13:56
နင်ညီမ အဲလိုဖြစ်၇င်န်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးလေ နင်ကအမျိူးပျက်လဲစိတ်မပူပါဘူး ကုလားမယားဖြစ်လဲစိတ်မပူဖူး ပိုက်ဆံ၇ဖုိ့အေ၇းကြီးနေတယ်မဟုတ်လား(မြန်မာမ)
ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးလွင်က နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားများကို ပေးအပ်ခြင်း
[image: မရမ်းကုန်း မြို့နယ် အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်ရှိ ပဋ္ဌာန်း ဓမ္မာရုံ၌ မေ ၂၁ ရက်က မိုးပွင့်အဆင့် (၅) စီမံချက်ဖြင့် ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ...
သမ္မတ ဦးသိန်စိန်၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် အမေရိကန်-မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေးကောင်စီ စတင်ဖွင့်လှစ်
နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေး မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အမေရိကန်-မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေးကောင်စီကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်မြို့တော် နယူးယောက်မြို့တော်နှင့် မြန်မ...